कालो विधवा किरणहरू - पैसाको लागि पैसा कमाउने महिला
अमेरिकामा सीरियल किलरहरू
प्रायः मारिएका स्त्रीहरूले एउटै हानिकारक गुणहरू साझा गर्छन्। जेसन, जो एक धीमी गति र मृत्यु को लागी मृत्यु हो, प्राय: उनको हतियार को छनौट र मुद्रा को प्रेरणा हो। "ब्लैक विधवा" नामले यी महिलाहरूको ठूलो प्रतिशत फिट भएको जस्तो देखिन्छ किनभने, घातक स्पाइडर जस्तै, धेरै महिला हत्याराहरूले तिनीहरूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई हड्ताल गर्छन्।
वेल्मि बारफिल्डले उनको वरिपरिका मानिसहरु लाई पैसा लिन को लागी एक खराब मामला राखेका थिए र जब उनीहरुलाई पक्कै लागेकी थिईन, उनीहरुलाई पीडित आर्सेनिक खाना खाएर समस्याबाट छुटेका थिए। अदालतमा, उनले दावी गरे कि उनीहरूलाई उनीहरूको चोरीको बारेमा पत्ता लगाउन खोज्दा केवल नयाँ काम खोज्न निकै लामो थियो, तर जूरीले यसलाई खरीद गरेन।
बारफिल्ड को 1978 मा स्टुअर्ट टेलर लाई मृत्युदण्ड को दोषी ठहराने को दोषी पाया गया। पछि उनले आफ्नो आमा र दुई बुजुर्गहरुलाई उनको हेरविचार मा विषाक्त रूप मा विषाक्त गर्यो, उनको नाम "मौत पंक्ति दादी" कमाई। बढि »
"हेंडरसन काउन्टीको कालो विधवा" बीटलाई 1980 मा उनको पाँचवें पति, जिमी डोन बेट्स को शूटिंग र उनको शरीर को दफन गर्न को लागी मृत्युदण्ड दिइयो उनको घर को यार्ड मा ग्याँस बैरलेल सिटी टेक्सास। तर उनीहरूले केवल बिट्स द्वारा लुकाइएका पाउने एक मात्र शरीर थिएनन्।
पति चार चार, ड्योल वेन बार्करको अपमानित निकाय पनि योर्डमा संग्रहण बहाली को तल खोजिएको थियो। एक ओटोप्सीले बताएको छ कि बेट्स र बार्कर दुवै टाउको धेरै चोटि गोली मारिएको थियो।
बेट्टी बेटले आफ्नो छोरामा दोषी औंलालाई संकेत गरे, तर तिनले जोरीलाई पछि हट्नुपरेको थियो जसले पछि उनको हत्याको दोषी पाए। बढि »
ओकलाहोमा अन्वेषकहरूले नानी डोसलाई आफ्नो पाँचवें पतिको बाँकीमा भेट्टाउन ठूलो मात्रामा जहरको बारेमा प्रश्न गरिसकेपछि उनीहरूले उनीहरूको भविष्यवाणी गरिसकेका थिए।
साक्षात्कार समाप्त भएको बेला डोस, पछि "द गिगीग दादी" र "जोली ब्ल्याक विधवा" भनिन्छ भनेर उनको परिवार, आमा, बहिनी र एक पोते सहित 11 थप परिवारका सदस्यहरूलाई मारेको थियो। बढि »
Janie Gibbs एक धेरै देनदार महिला थियो जब उनले आफ्नो पति को उनको ज्यान मा राखिएको चूहे को जहर संग मारने पछि बीमा को धन संग गरे। उनले उनको चर्चबाट पाएको सहानुभूति र सहयोगको अचम्मको चिन्तामा पनि भोगेको थियो। वास्तवमा, उनले पैसा र मजा प्राप्त गरे कि उनले यति धेरै प्राप्त गरे कि उनले आफ्नो परिवारको बाकी मार्न कोसिस गरे। बढि »
एमी "बहन" आर्चर-गिलिन्गले पिससर, वाइसेर्समा एक निजी नर्सिङ घरको स्वामित्व लिनुभयो जहाँ उनी आफ्ना वृद्ध अतिथिहरूले टनिकिक्स र पोषण भोजनको पोषण गरे। फिर्तीमा, तिनीहरूले आफ्नो जीवन बीमा नीति र मृत्युको ठूलो रकम दाँयामा हस्ताक्षर गरेका थिए, वा त्यसैले उनी अफगानिस्तानको दुर्व्यवहारको लागी पछि लागेका छन भन्ने विश्वास गर्छन्।
यो जूरी आफ्नो पति, फ्रान्कलिन आर एन्ड्रयूजको हत्याको दोषी दोषी गिलगिगलाई भेट्न केवल चार घण्टा लाग्दथे, यद्यपि उनी नर्सिङ घरमा 48 जना बिरामीको हत्या गर्ने शंकामा थिए। बढि »
बेले गननेस एक स्ट्रोट 280 पाउन्ड महिला थियो जुन पुरुषहरु लाई उनीहरु को व्यक्तिगत विज्ञापन मार्फत को आकर्षित गर्न को लागी कम समस्या थियो। धेरै पुरुषहरूले ला पोर्टे, इंडियानामा उनको सानो खेतीमा देखाए, तर त्यसोभए, कहिल्यै फेरि देखिने छैन। तर यो निर्दोष हत्याराले मानिसलाई मात्र मार्दैन। उनले पनि अपरिहार्य महिलाहरु र तिनका गोठाला बच्चाहरुलाई पनि मारे। बेले गुननेस 'घरमा कुनै पनि सुरक्षित थिएन। बढि »
ब्ल्यान्सी मूरले उत्तरी क्यारोलिनामा मृत्यु पङ्क्तिमा बस्छ र आर्मीसनको प्रयोग गर्नका लागि उनको प्रेमी प्रेमी, रेमंड रीडलाई हत्या गर्न को लागी 1986 मा लगाइएको थियो। तर उनी सबैजना थिएनन् जो मूसले विषाक्त हुने सम्भावना छ। यो उनको बुबा, आमाबाबु, दुई पति र एक प्रेमी प्रेमी पनि यस्तै मृत्युको मृत्यु भयो। उनले किन गरे? अभियुक्तहरूले वित्तीय लाभको लागि भन्छन्। अरूलाई विश्वास छ कि उनीहरूको गहिरो कारण थियो।
जहाँ बेट्टी नियमर गए, मृत्यु पछि लाग्न थाल्नुभयो, विशेष गरी यदि तपाईं पाँच जना पति थिए। तर उनको पछिल्लो पतिको हत्याको लागि तिनको गिरफ्तारी पछि पनि उनीहरुको लागि सदाको लागि जाँच्न सकेन। अथवा उनले गरे?
हेलेन गोले र ओल्गा रटरप्टरमिड
ओल्गा रटरप्टरमिड (एल) र हेलेन गोले (आर)। Getty Images / Pool
हेलेन गोला र ओल्गा रटरप्टरमिड, उनीहरूको 70 वर्षमा उनीहरूले आफ्नो आय बढाउन र शैलीमा सेवानिवृत्त गर्ने निर्णय गरे र उनीहरूलाई प्रेम गरेर उनीहरूलाई खाना र आश्रय प्रदान गरिन्, उनीहरूलाई पैसाको पैसा तिर्न नसकेको थियो। $ 2.3 मिलियन भन्दा पहिले तिनीहरू रोकिए। घातक डुङ्गा अन्ततः लोरी र अलर्ट जासूसको कारण पकडिएको थियो।
एमी फिशर, 'लङ आइल्याण्ड ललिता'
टेरा कैप्री गोबबल
कलरिन युवाले बदला लिएका उनको पोर्चुगलहरू
कागज क्रोमोग्राफी पत्तिहरूसँग कसरी गर्ने?
आवश्यक बाइक कम्यूटर गियर
साडी ट्यानर मोसेल अलेक्जेंडरको जीवनी
आफ्नो तेललाई सजिलै जाँच्नुहोस्
मानक विचलन कहिले ज्वरो छ?
टोम्पोनको संक्षिप्त इतिहास
प्लट कसरी संक्षेप गर्ने
फ्रान्सेली अभिव्यक्ति प्रेन्ड्रे को प्रयोग गरेर
चिकी र जीवंत चा-च नाचको बारे सबै जान्नुहोस्
24 सुन्दरताको बारेमा प्रसिद्ध उद्धरण
गुरुत्वाकर्षण मोडेल के हो?
जिमनास्टिकमा पोडियम प्रशिक्षण के हो?
अमेरिकी गृहयुद्ध: स्पॉटसल्भिल्वेनिया कोर्ट हाउस को युद्ध
शीर्ष5नल एडम्स सुपर-टाइमको सुपरम्यान हास्य
कैस गिलर्टको जीवनी
परिभाषा र उल्लेखनीय लेख कसरी प्रयोग गर्ने: ए, एन, द
लास ले भन्यो कि ओबामाले कोर्टे सुपरमामा निर्णय गरे
50 भन्दा अघिल्लो 50 वर्ष वा त्यसैले धेरै भन्दा धेरै आकर्षक बाकसहरू
कम्पन व्हाइट फिंगर: उपचार र रोकथाम